छोटो समयमा वैज्ञानिक तरीकाले शरीरको तौल घटाउने तरीका यस्तो छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
छोटो समयमा वैज्ञानिक तरीकाले शरीरको तौल घटाउने तरीका यस्तो छ !!
बढ्दै गरेको तौल अहिलेका पुस्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । अहिलेको जिवनशैली र खानपानको तरिकाले तौल बढ्दै जाने र विभिन्न रोग लाग्ने जोखिम अत्याधिक हुने भएकाले यसलाई घटाउनु जरुरी छ । तर एक पटक बढेको तौल घटाउन निकै मुस्किल हुने गरेको छ । नयाँ अनुसन्धानका अनुसार तपाईं आफ्नो वजन घटाउन चाहनुहुन्छ त्यसका लागि सजिलो तरिका वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् । त्यसका लागि अरु केही गर्नु पर्दैन तपाईले खाना खाने गति कम गर्नुपर्नेछ ।
बेलायतमा ४ देखि ५ वर्षसम्मका हरेक १० बच्चामध्ये एक जनामा मोटोपनको समस्या छ। त्यस्तै १० देखि ११ वर्षसम्मका हरेक ५ बच्चामा एक जना मोटोपनबाट पी डि त छन्। बेलायत हेल्थ एजेन्सीका अनुसार ६७ प्रतिशत पुरुष र ६० प्रतिशत महिला मोटोपनको समस्याले पी डि त छन्। (gnewsnepal.com बाट सभार)